PetrPikora.com - Ruzivo Base
Znalostní báze a katalog stránek s podporou umělé inteligence a překladem do více než 110 jazykových mutací
Kuratidza zvinyorwa neelebheri inbound batanidzo
Backlinks kune yako saiti
Backlinks ndiyo hwaro hwebasa reinjini dzekutsvaga paInternet. Kurongeka kwematsvagirwo ekutsvaga (SERP) kunoenderana zvakanyanya pane huwandu uye hunhu hwemashure ekubatanidza peji. Kunyanya, iyo nhamba uye zera rezvabatanidzwa, zvinyorwa zvakatenderedza chinongedzo, "mapeji emhando" anoongororwa. Nzvimbo yacho inozoverengerwa kubva ku data iyi, iyo inoshandiswa kugadzirisa zvawanikwa pakutsvaga.
Iyo yekubatanidza faira ndeyekuunganidzira kune ese kumashure mawati anotungamira kune saiti iwe uri kutarisa. Iyo pisitiri yekubatanidza inotungamirwa pane yekubatanidza link kune webhusaiti. Backlinks inongedzo yeinjini dzekutsvaga dzinotaura nezve kunaka uye mukurumbira wesaiti yauri kuona. Izvi zvinobatsira, pakati pezvimwe zvinhu, kuwedzera huwandu hwemawebhusaiti akabatanidzwa.
Backlink. Backlink (inbound link) zvinoreva chero chinyorwa chinongedzera kune peji rakapihwa kubva kune imwe peji. Kana isu chete tichireva backlinks kubva kune mamwe mawebhusaiti, saka basa rekutanga re backlinks rinonyanya kuunza vashanyi vatsva kuwebsite yedu.